Miaraka amin'ny watchOS 7.6, ny asan'ny ECG an'ny Apple Watch dia mahatratra faritra vaovao 30 | Avy amin'ny mac aho
Ny asan'ny ECG dia tonga tao amin'ny Apple Watch tamin'ny famoahana ny Series 4, 2 taona mahery lasa izay, na izany aza, noho ny zava-misy fa tsy maintsy mandresy andian-dahatsoratra any amin'ny firenena tsirairay izay tian'i Apple hanolorana io asa io izy, ny ny fizotry ny fananganana dia efa miadana kokoa noho ny nantenain'ny Apple tamin'ny voalohany.
Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay, nankatoavina tany Chine sy Aostralia io fampiasa io. Saingy amin'ny famoahana ny watchOS 7.6, ity endri-javatra ity dia misy amin'ny firenena 30 vaovao izao, araka ny hitantsika amin'ny antsipirian'ny kinova ao amin'ny tranonkalan'i Apple.
Ity kinova vaovao an'ny watchOS ity, ankoatry ny fanohanana ny fampiharana ECG, dia manohana ny fampandrenesana ny tahan'ny fo tsy ara-dalàna. Ireo faritra vaovao ahafahan'ny asan'ny electrocardiogram an'ny Apple Watch Series 4 mandroso dia:
St. Kitts sy Nevis
St.Vincent sy ny Grenadines
Ahoana ny fiasan'ny ECG
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sensor tahan'ny fo voaorina sy ny fampiharana tahan'ny fo voaorina ao anaty trano, ny fampandrenesana Irregular Heart Rate dia mamela ny mpampiasa raha toa ka mihoatra ny na ambany ny taha naroso ny tahan'ny fony mandritra ny 10 minitra.
Ny oscillations toy izany tsy misy antony mazava dia mety hanondro ny tahan'ny fo mety hampidi-doza ary hitarika toe-javatra matotra kokoa, toy ny atrial fibrillation (AFib).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Miaraka amin'ny watchOS 7.6, ny asan'ny ECG an'ny Apple Watch dia mahatratra faritra vaovao 30
Twitter ny fanavaozana azony avy amin'ny fampiharana TweetDeck